International Archives - Page3of6- Gloria News Journal
ရဟန္တာများသမိုင်း၌ အသက်အငယ်ဆုံးသော ရဟန္တာများအဖြစ် ရဟန်းမင်းကြီးက သူတော်မြတ်ဖရန်စစ်ကိုနှင့် ဂျာစင်းတာတို့အား တင်မြှောက်မည်
ဗာတီကန်၊ ဧပြီလ ၂၀၊ EWTN
ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်သည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ ဖာတီမာမြို့မှ မယ်တော်မာရီယား ထင်ရှားပြခြင်း၏ နှစ် (၁၀၀) ပြည့်သောအချိန်တွင် မယ်တော်မာရီယား၏ ကိုယ်ရောင်ထင်ရှားပြခြင်းကိုခံကြရပြီး သူတော်မြတ်များ အဖြစ်ကြေညာပြီး သော ဖရန်စစ်ကိုနှင့် ဂျာစင်းတာတို့အား ရဟန္တများအဖြ..
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဗာတီကန်နိုင်ငံ (ရဟန်းမင်းကြီးရုံး) သံရုံးကို ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၇
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဗာတီကန်နိုင်ငံ (ရဟန်းမင်းကြီးရုံး) နှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင် ရန် ဗာတီကန်နိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက်ကို မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့က အတည်ပြုလိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ဗာတီကန်နိုင်ငံ (ရဟန်းမင်းကြီးရုံး)သည် သံတမန်ဆက်ဆံမှုကို ထူထောင်ရန�..
ဗာတီကန်နိုင်ငံ (ရဟန်းမင်းကြီးရုံး) က မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံမှုကိုထူထောင်ရန် မြန်မာအစိုးရကို တရားဝင်အဆိုပြုလွှာ ပေးအပ်ပြီ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄၊ ၂၀၁၇
ဗာတီကန်နိုင်ငံ (ရဟန်းမင်းကြီးရုံး) သည် ပြည်ထောင်စုသမ်္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံမှုကို ထူထောင်ရန် အတွက် အဆိုပြုလွှာကို မြန်မာအစိုးရအား ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ်္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်အောင် �..
Rohingya Muslims commit genocide to Myanmar people in Rakhine State
December 4, 2016, Yangon, Myanmar.
In support of our Myanmar government’s resolution on Rohingya Muslims issues, I firmly announce that Rohingya muslims are committing genocide to ethnic Rakhines in Myanmar by the crisis followed violence on October9in which gunmen attacked three police outposts in Maungdaw township in northern Rakhine State near the Bangladesh border, leaving nine police officers dead. The government said that the attackers made off with dozens of weapons and thousands of rounds of ammunition. The Burmese government asserts the attack was carried out byaRohingya group that our government already released responsible persons’ names as well. I assert that our Myanmar army and government are not committing genocide to Rohingya Muslims in the Western part of ..
Give PeaceaChance in Kachin Lands by Cardinal Charles Bo
On behalf of all the people of good will, I take this opportunity to make an urgent appeal for peace and reconciliation in this long suffering nation. I call upon my country men and women to seize the opportunity for greater democracy, peace and justice. After six decades of suffocating political system, democracy has been enthroned through the sacrifice of hundreds of our country men and women. We are grateful to all for this spring of democracy. I applaud all, the political parties, the army, the civil society and religious leaders for their sagacity. Things are not the perfect but we are miles away from ten years ago. Myanmar stands on the world stage with great dreams. But there are areas where this dream is still to reach. I refer t..
ဗာတီကန်နိုင်ငံသည် (၂) မိုင်ပတ်လည်ဖြင့် ၀န်းရံထားပြီး အီတလီနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ရှိလေသည်။ ဤနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ပြီးအချုပ် အခြာပိုင်သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကျယ်အ၀န်းမှာ ဧက (၁၀၀) သာ ရှိကာ အ..